Global Voices teny Malagasy » Noelin-dry zareo any Karaiba · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Desambra 2008 15:00 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Barbady, Bermuda, Dominika, Goadelopa, Goiana, Goiana Frantsay, Haiti, Jamaika, Kiobà, Martinika, Nosy Cayman, Pôrtô Rikô (Etazonia), St. Vincent & the Grenadines, Trinite sy Tobago, Fifindràmonina, Fivavahana, Sakafo, Teratany, Toekarena sy Fandraharahàna, Zavakanto & Kolontsaina
Noely ny andro – Ary tsy misy n'aiza n'aiza mankalaza ny Noely  ohatran'ny any Karaiba ! Inty misy topi-maso kely ny amin'ny ataon'ny mpitoraka blaogy avy any Karaiba mba ho tafiditra ao amin'ny fanahin'ny fankalazàna…
Ny mpitoraka blaogy avy any Guyana  dia nanao “meme”  amin'ny hoe “Tsy Krisimasy ny Krisimasy rehefa tsy misy …” Ho an'ny Signifyin’ Guyana , izay nanomboka an'ilay “meme”, dia hoe “ny nofon-kenan-kisoa nataon'i dadanay” sy “filalaovana lalao iraisana miaraka amin'ny fianakaviako rehefa avy nihinana sy ny sisa.” Guyana 911  dia maneho ny heviny (indraindray amin'ny fomba mandranitra) amin'ity lisitra manaraka ity:
Raptus8  dia mieritreritra fa ny fanolorana fanomezana dia tsy afa-misaraka amin'ny Noely (raha ohatra ka izy no hotolorana ilay fanomezana):
Any Jamaika, Iriegal  dia miteny fa na dia midika hoe miaraka amin'ny fianakaviana aza ny Krismasy, ny fahasahiranana ara-bola eran-tany dia misy fiantraikany eo amin'ny fandefasam-bola sy ny fanomezana alefan'ny diaspora ho aty Jamaika:
Izy koa dia manamarika fa ity fihisaran'ny toe-karena ity dia mampiova ny fahatsapana  an'ity Noely ity:
Ny Krisimasy dia tsy Krisimasy rehefa tsy misy deh white dem. (Toaka fotsy Jamaikana). Ampiasainay anaovana “sorrel” io, Mofomamy amin'ny Noely, “Pudding” amin'ny Noely sy ny sisa. Noho izany maninona ny tompon'ny Wray and Nephew  no nandroaka ny mpiasa alohan'ny Krisimasy? Tsy mandrora mitsilany ve izany?
Aleon'ny Abeng News Magazine  mamerina an-tsaina ny lasa, mijery ny Krisimasy tamin'ny “Jamaika fahiny” ato  sy ato .
Ny The Devil Island.com -n'ny Bermudes dia nahafantatra ny hoe Krisimasy izay rehefa nihira ny Feliz Navidad  i Jose Feliciano , ary miteny hoe:
Ny mpitoraka blaogy avy any Trinidad This Beach Called Life  dia manamafy, ary miantso azy ho “hira Krisimasy tsara indrindra amin'izay rehetra misy” ary dia nandefa horonan-tsarin'i Feliciano mihira ny hira nahafantarana azy. Manazava izy:
Na izany aza, mpitoraka blaogy avy any Trinidad sy Tobago  Coffeewallah  dia mahita hoe sarotra ny manakatra ny fanahin'ity vanim-potoana ity:
Efa miresaka ny fototry ny Krisimasy ihany, Simply Trini Cooking  dia manome voninahitra an'ilay desera malaza avy any Inde andrefana, Black Cake , ary nanome ny “zavatra rehetra ilaina” sao misy te-hanandrana hanao.
Barbados Underground  dia mandefa fampatsiahivana momba ny anton'ny fety ary maneho ny fanahiany amin'ny fivoizana ny resaka varotra mandritry ny fialan-tsasatra:
Mahita akony koa izay fanahian'i BU izay ao amin'ny Dominica Weekly , izay mieritreritra momba ny tena dikan'ny Noely ary lasa lavitra amin'ny fanontanian-tena ny amin'ny mety ho eritreretin'Andriamanitra  momba ny fankalazan'ny andro maoderina.
Ny fankalazana ny Noely any amin'ny Karaiba frantsay , amin'ny lafiny iray, dia toa tafalatsaka ao amin'ny fomban-drazana. Efa manakaiky haingana ny 25 Desambra, ny departemanta frantsain'ny Outre Mer ao Guadeloupe , Martinique  sy Guyane  dia ampangovirin'ny feon'ny zava-maneno nentin-drazana toy ny ka  (amponga lehibe)[Fr] sy ti-bwa (vatam-bararata be roa)[Fr] sy ny hira Krisimasy. Tongasoa eto amin'ny tontolon'ny “Chanté Nwel” (hira ho an'ny Krisimasy)!
Ao amin'ny blaogy Sous le Soleil de Guadeloupe  [Fr], Pat sy Jac dia manoritsoritra ny toerana saro-takarina misy ny nosy, izay sondriana amin'ny Noely nefa koa ao anatin'ny krizin'ny solika.  [En].
Na eo aza izany rehetra izany, misy zavatra iray izay maharitra ao amin'ny fankalazana amina'ny fomba nentin-drazana ny Noely any Guadeloupe ary izy io dia ny “Chanté Nwel”. Teny Creole  [En] entina milaza ny “Fihirana ho an'ny Krismasy” na “Mihira Krismasy (hira)”, io no mariky ny Noely any amin'ireo faritra frantsay ireo. “Chanté Nwel” dia fanararaotan'ny fianakaviana manontolo mba hitsidihana ny mpiray vodirindrina sy mihira hira Krisimasy miaraka aminy amin'ny feon'ny “ka” sy ny “ti-bwa”. Tamin'izany fotoana izany, mbola am-pilaminana no andehanan'ny olona miala lavitra ny tanàny amin'ny alina.
Na dia tsy toy ny taloha intsony aza ny fankalazàna ny Chanté Nwel, mbola mahatsapa ny filàna mihira miaraka ny hiran'ny Krisimasy ihany ny mponina ary amin'ny fomba tena vokatry ny tany. Tsy nankalaza ny Krismasy ianao raha tsy tany amin'ny “Chanté Nwel”! Toa ohatran'ny fomban-drazana tena manaitra izy ity hany ka na ny diaspora avy any Inde andrefana aza te-hankalaza azy. Ao amin'ny blaoginy Risbomontréal  [Fr], mpianatra izay eny amin'ny anjerimanontolo any Guadeloupe no manoritsoritra ny hafaliany nahazo fanasana ho hanatrika “Chanté Nwel”:
Toa miparitaka any amin'ny toerana rehetra misy Indiana Tandrefana frantsay ny tazon'ny Chanté Nwel : porofon'izany ity fanasana ho an'ny Chanté Nwel ity tany Cergy , faritra ambanivohitry Paris, navoakana andiana Indiana tandrefana ao amin'ny blaogy Carrefour du Soleil  [Fr]. Na henoy Cactus, tarika mpihira vakodrazana avy any Guadeloupe izay mampahafantatra ny Chanté Nwel ao amina blaogy antsoina hoe Cactus Chanté Nwel  [Fr]. Ahitana horonan-tsarin ‘ ny Cactus mihira hira Krisimasy koa ao, amin'ny teny créole (kiriolona) .
Tsy afaka mankany amin'ny Caraibe amin'ity Noely ity? Aza matahotra – Ny hafanan'ny Indiana Tandrefana dia tsy voasakan'ny elanelan-tany noho ny feon'ny mpitoraka blaogy izay nizara ny tantaran'ny Krismasiny tany Cuba , St. Vincent sy ny Grenadines , ny nosin'i Cayman , ary Puerto Rico . Sasany amin'ireo “afatra ireo  dia manana fijery miabo kokoa noho ny hafa , misy fihetseham-po azo tsapain-tanana tamin'ity vanim-potoana: ny Fanantenana.
Raha araka an'i Womanish Words  mpitoraka blaogy iray avy any Bahama dia :
Fabienne Flessel  koa dia nandray anjara tamin'ity hafatra ity .
Ny sary rehetra janinephoto ; dia nahazoana alalana avokoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/28/1457/
 any Karaiba: http://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean
 Izy koa dia manamarika fa ity fihisaran'ny toe-karena ity dia mampiova ny fahatsapana: http://iriejamaica.blogspot.com/2008/12/rum-war-dem-start.html
 Jose Feliciano: http://www.josefeliciano.com/espanol/index2.html
 Black Cake: http://www.newsday.co.tt/features/0,91964.html
 mety ho eritreretin'Andriamanitra: http://www.dominica-weekly.com/opinion/what-does-god-think-of-christmas/
 Karaiba frantsay: http://en.wikipedia.org/wiki/French_Caribbean
 ao anatin'ny krizin'ny solika.: https://globalvoicesonline.org/2008/12/03/french-guiana-the-unheard-blackout/
 St. Vincent sy ny Grenadines: http://hairoun.blogspot.com/2008/12/ah-love-me-christmas.html
 ny nosin'i Cayman : http://caribbean-beat.blogspot.com/2008/12/christmas-in-caymans.html
 Puerto Rico: http://speakingboricua.blogspot.com/2008/12/navidad-season.html
 Sasany amin'ireo “afatra ireo: http://desdecuba.com/generationy/?p=358